Wig वा कपडा निर्माता र आपूर्तिकर्ताका लागि चीन ढक्कन र तल प्याकेजिंग बक्स ज्ञान प्रिन्टिंग
ढक्कन र तल प्याकेजिंग बक्स विग वा कपडाका लागि
उत्पादको नाम: विग वा कपडाको लागि ढक्कन र तल प्याकेजिंग बक्स
बाहिरी आयाम: २xx१xx6.२ सेमी
भित्री आयाम: २.5..5 × १२.xx 5..7 सेमि
सामग्री: २mm एमएम ग्रे बोर्ड १ 157g लेपित कागजले बेह्रेको छ
रंग: सेतो, अनुकूलन
शिल्प: तातो स्ट्याम्पि।, म्याट फाड़फेरो
एकाई मूल्य: usd2-usd10
एफओबी पोर्ट: किंगदाओ, टियानजिन, शंघाई, आदि
MOQ: 100pcs अनुकूलन अर्डरको लागि
क्विंगदाओ नलेज प्रिन्टि Q क्विन्डाउ, चीन मा एक बक्स निर्माता छ। १y बर्ष भन्दा बढीको समृद्ध उत्पादन अनुभवको साथ हामी छनौट गर्नका लागि राम्रो मूल्य, गुणवत्ता र अधिक बक्स शैलीहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं। रातो कार्डबोर्डले यस बक्सलाई अझ सुन्दर बनाउँदछ, यति धेरै ग्राहकहरू यसलाई मन पराउँछन्।
डिजाइनिंग → मोल्डिंग → प्रिन्टिंग → फिल्म टुक्रा टुक्रा lu gluing → मरो काट्ने, गुणवत्ता निरीक्षण → प्याकिंग → शिपिंग
उन्नत मुद्रण प्रेस र अनुभवी कार्य टीम।
सामग्री चयनबाट सख्त गुणस्तर नियन्त्रण, समाप्त उत्पादनको लागि पूर्व-उत्पादन मेशीन परीक्षण।
वर्षको प्याकेजि production उत्पादन अनुभवको साथ, पेशेवर टीमले समय समयमा तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ।
हाम्रा सबै उत्पादनहरू अनुकूलित गर्न सकिन्छ। कुनै पनि आकार, आकार, डिजाइन, लोगोले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ, हामी सबै गर्न सक्दछौं।
हामी निःशुल्क डिजाइन सेवा प्रदान गर्न सक्दछौं। कला कार्य ढाँचा: PDF, INDESIGN, AI
(१) अवस्थित नमूनाहरू नि: शुल्क छन्।
(२) नमूना लागत अनुकूलित नमूनाहरूको लागि शुल्क लिइनेछ, जुन सामूहिक उत्पादनबाट फिर्ता हुनेछ।
()) नमूना अग्रिम समय -5--5 दिन हो।
Our. हाम्रो फाइदाहरू
(१) प्रतिस्पर्धी मूल्य
(२) नमूनाहरूको द्रुत कार्य
()) <२ hours घण्टा द्रुत जवाफ।
Q1: के तपाईंसँग बिक्रीको लागि स्टकमा वस्तुहरूको दायरा छ?
हाम्रा सबै उत्पादनहरू हाम्रो ग्राहकहरूको माग अनुसार डिजाइन र निर्मित छन्। थोरैसँग स्टक छ।
Q2: के तपाई निर्माता हुनुहुन्छ?
हो, हामीसँग आफ्नै कारखाना छ र १ 16 बर्ष भन्दा बढिमा प्रिन्टिंग र प्याकेजिंग उद्योगमा व्यावसायिक समाधानहरू प्रदान गर्दै आएका छौं।
Q3:तपाइँको अर्डर को न्यूनतम मात्रा के हो?
सामान्यतया, हाम्रो MOQ p०० पीसी हो, यद्यपि कहिले काहिं हामी p०० पीसी भन्दा कम उत्पादन गर्छौं। यद्यपि, सानो अर्डरको लागि लागत धेरै नै हुन सक्छ जब प्रतिलिपि गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, टुलि .्ग र सेटअप लागतहरूको विचार गरिन्छ।
Q4: म कसरी आफ्नो गुणवत्ता जाँच गर्न को लागी एक नमूना प्राप्त गर्न सक्छ?
मूल्य पुष्टि भएपछि, तपाईं हाम्रो गुणहरू जाँच गर्न नमूनाहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। खाली कागजातको डिजाइन र गुणवत्ता जाँच गर्न खाली नमूनाको लागि नि: शुल्क, तर तपाईंले एक्सप्रेस शिपिंगको लागि तिर्नै पर्छ।
नमूना उत्पादन को लागी, हामी शूटिंग र प्रिन्टिंग को लागत को लागी usd30-100 चार्ज गर्नेछौं। अन्तिम मूल्य को प्रक्रिया को अनुसार पुष्टि हुनेछउत्पादन
Q5: यदि म प्रस्ताव प्राप्त गर्न चाहन्छु भने म तपाईंलाई के सूचना दिन्छु?
१) बक्स शैली
२) उत्पाद आयाम (लम्बाई) × चौडाई × उचाई)
)) सामग्री र सतह उपचार
)) रंग छाप्ने
)) यदि सम्भव छ भने, कृपया तस्वीरहरु वा डिजाइन चेक प्रदान गर्नुहोस्। नमूनाहरू सबै भन्दा राम्रो स्पष्टीकरण हुनेछ, यदि होईन भने, हामी सन्दर्भका लागि प्रासंगिक उत्पाद विवरण सिफारिस गर्नेछौं।
Q6: म कहिले मूल्य पाउन सक्छु?
हामीले तपाईंको खोज प्राप्त गरेपछि हामी प्रायः २ usually घण्टा भित्र उद्धरण गर्दछौं। यदि तपाईं यो मूल्यको लागि थिच्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई कल गर्नुहोस् वा तपाईंको ईमेलमा हामीलाई बताउनुहोस् कि हामी तपाईंको छानबिन प्राथमिकतामा विचार गर्नेछौं।
Q :: जब हामी कलाकृति सिर्जना गर्छौं, कुन ढाँचा मुद्रणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ?
१) लोकप्रिय पीडीएफ, सीडीआर, एआई, PSD
२) रक्तस्राव: -5--5 मिमी
Q8:कति दिन अनुकूलित नमूना पूरा हुनेछ? ठूला उत्पादनको बारेमा के हुन्छ?
सामान्यतया -5--5 कार्य दिनहरू नमूना उत्पादनको लागि लिइन्छन्।
सामूहिक उत्पादनको नेतृत्वको समयहरूको लागि, इमान्दार हुनका लागि, यो "अर्डर मात्रा" र "सीजन" मा निर्भर गर्दछ, र तपाइँको स्थिति "अर्डर" हो। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईको देशमा सुरु भएको मिति भन्दा दुई महिना अगाडि तपाईको छानबिन सुरु गर्नुहोस्।
Q9:के तपाइँले तैयार उत्पादन जाँच गर्नुभयो?
हो, हाम्रा सबै उत्पादनहरू गुणस्तर जाँच प्रक्रियाको माध्यमबाट हुनेछन्।
Q10:तपाईं कसरी समाप्त उत्पाद ढुवानी गर्नुहुन्छ?
)) DHL, FedEx, UPS, TNT, आदि मार्फत।
अघिल्लो: रिबन र साटनको साथ सेतो क्लामशेल विग बाकस
अर्को: चुम्बकको साथ शीर्ष कपडा बक्स फ्लिप गर्नुहोस्
अमेजन तातो बिक्रि लिफाफा आकार पुष्प बक्स
आयत बरौनी बक्स डायमंड ह्यान्डलको साथ